प्रोस्टेटको समस्या समाधानमा मसाज थेरापीको भूमिका «
प्रोस्टेटको समस्या समाधानमा मसाज थेरापीको भूमिका
प्रकाशित मिति : 25 January, 2020 1:57 pm
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ सरित्
राजधानीमा जताततै अस्पताल, पोलिक्लिक, हेल्थ सेन्टरका बोडॅहरु देख्न सकिन्छ । आयुवेॅदिक, होमियोप्याथिक, एलोप्याथी र नेचुरोप्याथीका माध्यम द्वारा विभिन्न रोगहरुको उपचार सम्भव हुने कुरा तिनले भिन्नभिन्न सञ्चारका माध्यमहरुद्वारा भनिरहेका हुन्छन् । ती अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा नयाँ, पुराना र स्थापित चिकित्सकहरुले सेवा पुर्याईरहेका हुन्छन् ।
अलि नाम चलेका डाक्टरहरुले एउटै सिटिंगमा बीस जना तीसजना सम्म बिरामीहरुलाई सेवा दिएको दृश्य देख्न सकिन्छ ? त्यतिमात्र नभएर एकजना चिकित्सकले एउटा अस्पतालमा मात्र हैन एकभन्दा बढ़ी अस्पतालबाट सेवा प्रदान गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो भीडमभीड र दौडादौडमा बिरामीले केकस्तो सेवा प्राप्त गछॅ र डाक्टरले के,कति र कस्तो उपचार सेवा प्रदान गनुॅ सक्छ ? बिरामी र डाक्टर दुबैको तफॅबाट सोच्नुपनेॅ हुन्छ ।
त्यसैले प्रोष्टेटको समस्याबाट छुट्कारा पाउन मसाज थेरापी अत्यन्त भरपदोॅ विधि भएको कुरा बिरामीहरुले थाहा पाउन जरुरी छ । यो मसाज थेरापीमा औषधिको प्रयोग नहुने भएकोले यसको कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन ।
आज यहाँ चचाॅ गनुॅ लागेको विषय प्रोष्टेटको समस्याका बारेमा हो । यो समस्याले गदाॅ मानिसलाई छिटोछिटो पिसाब लाग्ने, पिसाब ननिख्रिने, पिसाब पोल्ने, राति पनि पटकपटक उठिरहनुपनेॅ, पिसाब लागेपछी रोक्न नसक्ने, पिसाब गनॅ बल गनुॅपनेॅ, तल्लो पेटदेखि अण्डकोषसम्मको भाग दुख्ने, लिंगभित्र र मलद्वारमा पोल्ने, पिसाब गनाउने गदॅछ । प्रोस्टेटको समस्या बढ्दै गएर लिंगमा पयाॅप्त उत्तेजना नहुने स्थिति बढ्दै जान्छभने यौन विकषॅणको स्थितिसम्म हुनसक्छ जसले गदाॅ पारिवारिक जीवनमै नकारात्मक असर पानॅ सक्छ ।
प्रोस्टेटको समस्याले ग्रस्त पुरुष बिरामीहरुको भीड़ युरोलोजिष्टका रुपमा नाम चलेका डा. उत्तम शमाॅ, डा. अजुॅनदेव भट्ट , डा. भोलाराज जोशी लगायत डाक्टरहरु सँग जचाउँन र स्वास्थ्य लाभ गनॅ लाम लागेको देखिन्छ । लामो समयको औषधि सेवनबाट पनि रोग जाती नभएपछी बिरामी शल्यचिकित्साको शरणमा पुग्न बाध्य हुन्छन्। तर शल्यचिकित्सापछी पनि बिमारी निको नभएर बिरामीले दु:ख पाएको भनेदेख्न सकिन्छ । आथिॅक रुपले सम्पन्न व्यक्तिहरु त नेपालमा उपचार भएन भनेर दिल्ली र बैंकक धाउँछन् तर न्युन आय भएकाहरुले त स्वदेशमै उपचार गराउनुको विकल्प रहन्न ।
प्रोस्टेटको समस्या अठार वषॅको होस् वा चालीसको वा साठीकै किन नहोस्, जुनसुकै उमेरको पुरुषलाई पनि हुनसक्छ । त्यसैले आथिॅक समस्या नहुनेहरु पिसावको समस्या बाट छुट्कारा पाउन मसाज थेरापीका लागि बेंकक जाने गछॅन्। तर अब यो सुविधा नेपालीहरुले नेपालमै लिन सक्छन् । वरिष्ठ युरोलोजिष्ट डा. दीपक रौनियारले लाइफ इन्टरनेशनल क्लिनिक माफॅत् यो सेवा प्रदानगदैॅ आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरु तथा थेरापीका लागि बेंकक जान बाध्य बिरामीहरु अहिले थेरापी उपचारका लागि डा. रौनियारको क्लिनिक जान थालेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी, मलेशिया, कतार, कोरिया, जापान , इजरायल गएका कतिपय युवाहरु प्रोस्टेटकै समस्याको कारणले रोजगारी बाट फकिॅन बाध्य भएका छन् । यो समस्याको निदानका लागि शल्यक्रियागदाॅ पनि नभएपछी थप उपचारको क्रममा बिरामीहरु थेरापीका लागि लाइफ इन्टरनेशनल क्लिनिक पुग्ने गछॅन् र औषधि सेवन र थेरापीले चाँडै स्वास्थ्य लाभ गरेको कुरा उनीहरुले डाक्टरलाई धन्यवाददिंदै क्लिनिकमा लेखेर छाडेको नोटले भनिरहेको हुन्छ । त्यसैले प्रोष्टेटको समस्याबाट छुट्कारा पाउन मसाज थेरापी अत्यन्त भरपदोॅ विधि भएको कुरा बिरामीहरुले थाहा पाउन जरुरी छ । यो मसाज थेरापीमा औषधिको प्रयोग नहुने भएकोले यसको कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन ।
बिरामीहरुलाई आवश्यक परेमा:- डा. दीपक रौनियार लाइफ इन्टरनेशनल क्लिनिक, मध्यवानेश्वर सम्पकॅ : 9851071545